Any Kivu hatrany Gaza : Ny fomba isafidianan’ireo haino aman-jery ny ady ho rakofany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Oktobra 2018 17:33 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, Swahili, Español, Italiano, 简体中文, 繁體中文, English
Raha toa Palestiniana marobe maty vao mitovy amin'ny Israeliana iray maty, mba fatina kongoley firy no mitovy amin'ny lambampaty gazaoui iray (gazaoui no fiantso ny mponina ao Gaza) ?
Fa nahoana no kely ihany ny fifantohantsaina atokan'ny haino aman-jery ho an'ireo ady any Afrika, indrindra ireo loza mahatsiravina mitranga ao Kivu, izany no fanontaniana hatry ny fahagolantany (misisika toy ilay fitiavana hahalàla ny antony tsy hanaovan'ireo haino aman-jery iraisam-pirenena izany raha tsy resaka fifandirana irery ihany, rehefa mandrakotra an'i Afrika izy ireo).
Nanoratra mikasika izany tao amin'ity tranonkala ity i Elia Varela Serra, andro vitsy monja izay, nandika ny ampahany tamin'ny lahatsoratra nosoratan'ny mpanao gazety, Hugues Serraf, tao amin'ny Rue89. Niteraka adihevitra teny anivon'ireo mpamaky miteny frantsay, kongoley ary koa silamo maro ny fomba nitondran'i Serraf ireo fanontaniana ireo.
Mitovy fihetsehampo amin'i Serraf ny mpamaky sasany ao amin'ny Rue89.
Hazavain’ i Rafa ny antony hifantohan'ny haino aman-jery ao Frantsa kokoa amin'i Palestina fa tsy i Kongo :
Avy amin'ny fisian'ireo vondrom-piarahamonina 2 ireo ao Frantsa ny fahalemena tafahoatra ananan'ny fiarahamonina frantsay manoloana ilay ady eo amin'i Israely i Palestina, izay mamerina milalao eto ny zavatra mitranga any. Mihevitra kosa anefa aho etsy ankilany fa amin'ny maha-firenena « tandrefana » an'i Israely amin'ny heviny hoe tafiditra ao anatin'ny « tontolo malalaka » i Israely (hoy i Livni), afaka mihevitra ny tenany ho toy ireo Israeliana ry zareo Frantsay, ary manahirana ny sain'ny olona ny mahita fa afaka mitondra tena amin'ny fomba feno habibiana toy izao ny firenena noheverina ho mandroso, manana ny demokrasia toy ny antsika, misy olona mitovy fiainana amintsika, ny karazam-piarahamonina mitovy. Oharina amin'izany, miavaka toy ny loza efa im-piry miseho eo amin'ny kaontinanta voaozona ny ady misy ao Kongo, izay tsy raharahian'ny olona intsony nony farany noho ireny loza ireny diso miseho matetika loatra.
Ny mpiara-namorona ny Rue89, i Pierre Haski :
Tamin'ny volana lasa teo, nanatrika teny amin'ny toeran'ny Repoblika mihitsy aza aho tamin'ny hetsika nataon'ny Kongoley momba ilay ady ao amin'ny fireneny. Am-polony izy ireo, nihitsoka teo anelanelan'ireo tadin'ny CRS, tao anatin'ny tsy firaharahian'ny mpandalo. Ny Sabotsy, nanatrika ny fanombohana ny hetsika Palestiniana aho, feno fakantsarin'ny fahitalavitra.
Fa maro ireo nalahelo noho ny tsy fahalalan'ilay mpanoratra momba ilay kaontinanta. Nilaza i Serraf tao anatin'ny lahatsorany :
Toa anao ihany aho. Tsy mahafantatra zavatra be dia be mikasika an'i Kongo sy io Tafi-panoheran'ny Tompo io…. Indrindra fa hoe misy roa, ny Kongo! Ary i Afrika moa dia tena mifaningotra be. Amin'ireo loza voajanahary, ny areti-mifindra, ireo mpitarika ady mitondra Land Cruiser misy tilikambo kely, izany rehetra izany… Ahoana no hahafantarana ny ratsy saina sy ny tsara saina?
Nanoratra ihany koa izy hoe mety ho voarakotra kokoa ao Frantsa ny ady eo amin'i Israely sy Palestina satria, raha amin'ny lafiny ara-kevitra, moramora kokoa ny manavaka ny ”tsara” sy ny ”ratsy” ao anatin'izany.
Mamely mafy ao anatina fanehoankevitra iray manohitra ny tsy fahalalana ambaran'i Serraf ilay blaogera Alex Engwete, izay nandrakotra ny ady tao Kivu niaraka tamin'ny fanavaozana isanandro tao amin'ny blaoginy :
Mba nanomboka namboly fifandraisana taminao ihany aho tamin'ny hatezeranao mikasika ny fahanginana manodidina ny loza mitranga ao Kongo mialohan'ny nahitako tao anatin'ireo paragrafy telo farany hoe inona no tianao hambara. Tena saika nizara taminao ny zavatra nolazain'ny namako mpanao gazety ho an'ny BBC tany Nairobia mihitsy aza aho, izay nangatahan'ity tambajotra fampahalalam-baovao sy fampielezana vaovao ity hanatsahatra ny fandefasana taratasim-baovao momba an'i Kongo raha toa ka tsy ampy 50 ny isan'ireo teny ! Mainty ireny ary ny fon'ny haizina, sady izao koa, fenitra any ny « Zava-maharikoriko ! Zava-maharikoroko ! » — nanomboka tamin'i Joseph Conrad… Fa tonga saina niaraka tamin'ny hadisoam-panantenana aho hoe tsatoka iray (sarintsariny ara-pihetsehampo ) irery ihany i Kongo izay mitondra mankany amin'ny firodanan'ity kabarinao adaladala ity ! Raha tsy mahalala na inona na inona mikasika an'i Kongo ianao, avelao handy am-piadanana ireo maty any aminy !
Mialoka ao amin'ny trano iray ny fianakaviana maro rehefa noterena handao ny tranony noho ny fahamafisan'ny ady ao amin'ny faritany Avaratr'i Kivu (Sary UNHCR/ S. Schulman)
Manoratra i Djé, izay mitoraka blaogy ao amin'ny tranobongo andalam-panamboarana :
Matetika manodina ny jerin'ny haino aman-jery (ary ny an'ny daholobe ihany koa avy eo) tsy ho amin'ny zava-misy ao Kivu ankehitriny ny fanaparitahana tafahoatra loatra ataon'ny media amin'ny loza mitranga ao Gaza amin'izao fotoana izao. Araraotin'ireo mpanao gazety maharikoriko sasany mihitsy aza ny fandrakofana ara-media ny ady any atsinanan'i Kongo mba ho fitaovana ampiasana amina fampielezankevitra fombàna ny israeliana.
Raisin'i Djé ho toy ny ”andrana batritra mba hanodinana vaovao” ny lahatsoratr'i Serraf ary lazainy fa tokony handinika kokoa ny lahatsoratra soratana momba izany lohahevitra izany ao amin'ny kongotimes.info izy, izay milaza fa ”samy mitovy ihany ny tahotra amin'ireo ady roa ireo, ny tanjona sy ny loza mety hampihozongozona ny any amin'ilay faritra.”
Kiriko tamin'ilay fampitahàna nataon'i Serraf sy ny fanaitairana fihetsehampo ataon'ny haino aman-jery amin'ny ankapobeny amin'ny alalan'ilay fanafihana manjo an'i Gaza ireo mpampiasa ny sehatra islamie.com fifanakalozan-kevitra amin'ny aterineto. Manontany i Abdullah, maneso : ”Fatina afghanistana firy no ilaina amin'ny lambampaty gazaoui iray?
Manoloana ny firohotana amin'izao fotoana izao ho an'i Gaza, tena tsy azoko mihitsy ny aiko hatramin'ny namakiako fehezantenin'i Abou Ghazi nilaza fa misy foana ny vono olona, indrindra any Afghanistana, ary saika tsy misy vaky fo amin'izany mihitsy na iray aza. Tsy hoe mahatsiaro ho voa kokoa noho ny hafa aho na hoe tsy voa mihitsy. Saingy mamboraka zavatra maro (amin'ny heviny voalohan'ilay teny) ny fehezanteny toy izany.
Izany fahoriana misy antsika eh ! Avelantsika hampiesona, hanadala, hampivezivezy antsika ny haino aman-jery.
Tena mahaloiloy be aho.
Mamerina mankany amin'ny fahantrantsika izany fehezantenin'i Abou Ghazi izany. Manambara zavatra iray ihany koa : fa tena saribakolin'ny haino aman-jery isika, mangetaheta zavatra mampihetsi-po foana.
Hetsika ho an'ireo rahalahy sy rahavavintsika voaporitra, mila ary hila an'izany foana, mandra-pitondran'ny tenin'Andriamanitra ny eto an-tany.
Palestiniana mandevina ny fatin'i Lama Hamdan, 4 taona, tao amin'ny fasan'i Beit Hanoun tao avaratry ny lemaki Gaza, ny 30 desambra 2008 . Toa tany anaty sarety tarihina ampondra i Lama sy ny anabaviny, teny akaikin'ny toerana fandefasana balafomanga nokendren'i Israely. (Sary avy amin'i Amir Farshad Ebrahimi)
…efa nieritreritra momba izany im-betsaka aho nandritra izay andro vitsivitsy lasa izay. Fa amiko, tranga haingony fotsiny ny fihetsiketsehana izay atrehintsika amin'izao fotoana izao. Rehefa hiantsoroka ity raharaha ity ( wal 3ilmou liLeh ho an'ny vahaolana ) satria ”hilamina” ihany izany rehetra izany amin'ny fotoana iray, noho ireo houkams ananantsika, tsy misy atahorana ny mety ho firehetan'ny ady. Tsy ho aiza ankoatra ny andefasan'i ALLAH azy ireo amin'izay tanjony ireo kandidà amin'ny jiady hitantsika amin'ny fahitalavitra ao Yemen sy ao Jordania. Hiverina amin'ny zava-panaony azy ara-piarahamonina koa ireo miozolmana, hohadinoina i Palestina sy ny rà nandriaka tao Gaza.